Lezi amadivayisi, ezifana igazi glucose amamitha, sisanda uvele ezimpilweni zethu futhi kakhulu lula ukuphila sikashukela. Ukubhekana nazo kalula: Sebenzisa esanele isivivinyo strip iconsi legazi - nombukiso sizobonisa ezingeni ushukela. A ezahlukene igazi glucose amamitha, imingcele yabo, futhi ezihlukahlukene ongakhetha ewusizo bakwati kwetfula mathupha kumile, ukhetha idivaysi. Siza ekukhetheni idivayisi ungaba isilinganiso ka glucometers. Izibuyekezo zabantu abaye basebenzisa kudivayisi ingaqinisekisa ngokunemba ukukhetha.
Glucose uhlobo photometric efana ehlweni lomuntu, sokunquma degree of umbala ushintsho zone test, okuyinto eyenzeka ngo-ukusabela glucose ne reagent ehlanganisa glucose oxidase kanye udayi ekhethekile.
glucometer electrochemical bavame ukusebenzisa indlela entsha esekelwe metering wamanje, okuyinto kuphakama ngesikhathi yokusabela fanekiso kwegazi glucose kanye glucose oxidase.
Eyesibili indlela elula kakhudlwana ngoba usebenzisa iconsi ezincane kwegazi. Ukunemba yezindlela cishe ngendlela efanayo.
Ubukhulu iconsi legazi kuyinto ipharamitha ebalulekile, ikakhulukazi izingane nasebekhulile. Phela, ukuze uthole iconsi legazi e 0.3-0.6 l, kwakudingeka kwakhiwe we wokubhoboza, kancane ubuhlungu ukujula okungenani futhi kwenza kube lula ukuba aphulukise isikhumba. Amadivayisi kudingeka sihlaziye iconsi kulencane wegazi, ihamba uhlu glucometers engcono.
Ukuze isizukulwane yakamuva kwegazi glucose amamitha zinezikhathi esikhiqiza yalokho ngokushesha ngangokunokwenzeka - amasekhondi angu-10. On ukunemba umphumela akuphazamisi ijubane.
Imiphumela esheshayo baphume 5 imizuzwana imitha "Accu-Chek" Performa Nano futhi OneTouch Khetha.
Uma ungumuntu magazini ushukela control, kuba ithuba ezibalulekile zigcinwe kumemori idivayisi nesilinganiso zokugcina, ngezikhathi ezithile ngokulanda idatha ngekhanda imitha sika.
Umthamo elikhulu izilinganiso 500 enza Accu-Chek Performa Nano.
Inani kwamamitha glucose uyakwazi ukwenza Imiphumela uphawu ukuhlolwa ngaphambi nangemva ukudla benethuba izibalo ahlukene. Lokhu kunika amandla kokuhlaziywa kwamathenda ushukela esiswini esingenalutho kanye emva kokudla wedwa.
Lolu khetho luyatholakala glucometers OneTouch Khetha bese "Accu-Chek" Performa Nano.
Uma isiguli ayigcini i idayari electronic ukuzithiba nge sibalo ezomhlaba, ungasebenzisa inketho imitha. Umqulu enkulu idatha izibalo kungaba ithuluzi eliwusizo ngawe futhi udokotela wakho, ukusiza ukuhlola degree of isinxephezelo lesi sifo futhi ukuthuthukisa isu ukuthola imithi zikashukela-ukwehlisa.
Kuhle showgirl ukhiqiza glucometer Accu-Chek Performa Nano.
Imenyu ngesiRashiya. EBukhoneni imenyu ngesiRashiya kuba lula kakhulu ukusebenzisa imitha, okwenza kube kufinyeleleke njalo nesineke
imenyu Russian unikezwe glucometers OneTouch Khetha. Amancane, kulula ukuthatha nawe futhi uhlole i-glucose izinga lakho inkokhelo lapho idingeke khona. Ngenxa e esibonakalayo Russian zedivayisi ilula kakhulu ukusebenzisa, ngenkathi ehlukile nesilinganiso ukunemba. ungakwazi ukugcina isifo ngaphansi kolawulo ngosizo imitha ephathekayo.
Coding test emapheshana
Noma iluphi uvivinyo lube emapheshana party inikezwa code ehlukile. Ngo glucometers ezihlukahlukene le khodi isethiwe ngetindlela letehlukene:
usebenzisa chip usufakwa imitha kanye izikhwebu nge iphakethe lokuvivinywa emapheshana;
ngokuzenzakalelayo ukuthola ikhodi yokuhlola strip.
I elula kunazo kukhona amamitha glucose ne avtokodirovkoy ezifana Contour TS.
Okufakiwe test emapheshana
Ngo tube test emapheshana kungaba iqhubeka izinyanga 3 emva wokuvula. Uma ngamunye test strip emabhokisini angasetshenziswa ngaphakathi isikhathi esishiwo kwi isembozo. Lena elula lapho ayeyivelakancane ezingeni igazi izilinganiso.
emaphaketheni okunjalo isetshenziswa ku imitha, "Isethelayithi Plus" futhi Optium Xceed.
emapheshana Test kudivayisi
Inani strip ukuhlolwa kanye nezinga ubulukhuni Kubalulekile iziguli yokuguga, abakuthola kunzima ukuba bangasizakali izinto ezincane. Ngakho abantu kangcono, isivivinyo strip lalilikhulu futhi luthe ukuqina.
emapheshana Test zifakwe ikhithi imitha. Ngo abantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 ushukela ngokuvamile kulinganiswa izikhathi eziningana ngosuku. iyunithi Izindleko iziguli enjalo izokuba isamba izindleko imitha kanye nesethi emapheshana, okuyinto edingekayo ukuze ngenyanga. Oluthandwayo e intengo efanayo ongasinika amadivayisi nge inqwaba test emapheshana iphakethe. Ungase futhi ukuthenga umshini akanayo imivimbo.
- Izigubhu Isiqinisekiso. Kuvele isici esibalulekile ukuze isetshenziswe eside.
- Ukuxhumana. Uma ulungiselela ukusebenzisa abahlaziyi ekhethekile isofthiwe, le ndlela ikuvumela ukuba ngokushesha ukuletha zonke izibalo singene computer.
igazi OneTouch glucose amamitha anemisila ikhebuli ekhethekile elikhonza ukuxhumana nge-computer.
- Umsebenzi we izwi. Beka imitha yakho lenzelwa abantu kabani umbono kahle nokungabi bikho. izwi Glucometer esihambisana nazo zonke izenzo isiguli ukulungiswa inqubo izwi umphumela kokuhlola ezingeni ushukela.
- uhlobo amabhethri. Kubalulekile ukukhetha imitha kwegazi glucose, amandla okuyiwona ungakwazi ukuthenga esifundeni yokuhlala umnikazi wefoni.
Classic mizinchikovye AAA amabhethri esetshenziswa glucometers Bionime Rightest GM300.
- Ukunemba yomculo. A ipharamitha kubaluleke kakhulu. Ukunemba okuphezulu akuzona zonke amamitha igazi glucose. Isilinganiso Quality kuzokusiza ukhethe ithuluzi esinika Ukufundwa sinembe kakhulu.
Uma sikhuluma yobudala izintandokazi, abadala eduze kakhulu elula igazi glucose amamitha nge isihenqo esikhulu.
Abantu abasha abathanda umsebenzi ehlanganisa nokuya nomaphi, kubalulekile ukwazi ukuxhuma kwi-computer, ubukhulu compact zedivayisi kanye nenani inkumbulo esebenzayo.
glucometer British iCheck inkampani Diamedical. Usuthisa idivayisi kusukela nendinganiso eyodwa amabhethri CR-2032. supply yayo yakhelwe yalinganisa inkulungwane. Ubukhulu Meter - 80h58 mm.
Ngokweyame ezinhlinzekweni izilungiselelo imitha for Ukukhishwa nesilinganiso ngokwezindlela zesiLungu imiphumela angu deciliter noma millimoles ilitha njengoba kwakwenziwa eSoviet Union ngayinye. Ukulinganisa isikhathi - 9 imizuzwana. Ukuze-ke 1.2 ml igazi kuyadingeka. inkumbulo Imitha sika igcina umphumela wokugcina 180 izilinganiso, okuyinto wabelwe usuku nesikhathi angakahleleki. Kukhona izibalo Masonto onke imiphumela isilinganiso izilinganiso.
Uma uvula emgqonyeni entsha kudivayisi, kubalulekile kanye kuphela ukufaka chip esephepheni, okuyinto esanele ngamapayipi entsha.
Imitha unekhono ukuxhuma ikhompyutha, Nokho, intambo ngokuxhuma i-serial RS-232 esibonakalayo Ayibalwa.
imitha German Accu-Chek Performa Nano inkampani Roche has a usayizi ezihlangene. Ubukhulu balo kukhona 69h43 mm. Inikwe amandla yi-emibili yakudala amabhethri CR-2032.
Idivayisi idinga esincane kakhulu kwegazi - 0.6 ml. Ekhombisa bazabela imiphumela nezindinganiso ezimbili: imizuzwana embalwa kunani mmol / L futhi mg / dl.
Ukuze ukwazi ukuxhumana nge-computer, idivayisi ine seso lefoni. Izinhlelo ze-computer akezi nge imitha.
glucometer Hungarian Sensocard Plus inkampani E77 linemojula izwi futhi kungaba afundise futhi wazise nesineke mayelana imiphumela yokuhlaziya ngesiNgisi nezilimi Russian. Lolu khetho yakhelwe ukusiza abantu abanokukhubazeka ezibukwayo, okuyinto ngokuvamile kwenzeka ngo sikashukela. Ukuze amandla iyunithi kudinga amabhethri amabili CR-2032, njengoba ibhekene namacala ozobakhona wezinkulungwane izilinganiso. Ubukhulu imitha Sensocard Plus - 90h55 mm.
Ukuze ukuqhuba ukuhlaziya, iconsi legazi liyadingeka 0.5 ml. kokukhipha yi isikhathi - amasekhondi angu-5. Kungenzeka ukwenza idivayisi kulungiselelwa ukukala e mg / DL noma mmol / L. Idivayisi inkumbulo uyakwazi ukugcina imiphumela zokugcina 500 izilinganiso. Ungathola izibalo isilinganiso. Kungenzeka ukuba ngakususi Imiphumela ezithile ngomakha kubo njengoba ayivumelekile ngesisekelo izibalo. Ziyakwazi kwimemori, kodwa awahlanganyeli ukubala ezomhlaba.
Kukhona ikhadi ikhodi ukuthi ufakwa slot ekhethekile ohlangothini imitha. Uma ulahlekelwe, emapheshana ikhodi yokuhlola, ehlanganisa izinhlamvu ezintathu, angafakwa ngesandla. Idivayisi ifakwe i isilawuli infrared, kodwa isofthiwe alikapheli.
Inkampani kudivayisi Abbott Optium Xceed has ithuba ngaphezu amazinga igazi glucose kulinganiswa kusezingeni ezengeziwe zemizimba ketone, okuyinto siwumkhiqizo wokuziphendukela noqhekeko fat. Uma amazinga igazi emizimbeni ketone ophakamayo, lokhu kungase kubonise ukugula okungathí sina - ketoacidosis.
emapheshana Hlola ne-glucose ketone emizimbeni zidinga ezahlukene kanye Bathengisa ngokwehlukana.
Idivayisi has a encane usayizi 74h53 mm futhi ekhangayo kuqhathaniswa design mncintiswano. Idivayisi idinga umuntu "ihora" ibhethri CR-2032. Ibhethri ihlala ukuhlolwa eziyinkulungwane. Phakathi inhlolovo e glucometers Optium Xceed has a kwasemuva isikrini kuphela.
I assays glucose, kungenzeka ukuba ukhethe iyunithi. It ingafakwa ku izilungiselelo kudivayisi noma mg / DL noma mmol / L. Nesilinganiso emizimbeni ketone kwenzeka kuphela mmol / l.
Ukuze sihlaziye kahle glucose, badinga iconsi legazi 0.6 ul, isifundo zemizimba ketone iconsi kudinga kabili - 1.2 l. Fit Isilinganiselwa amakhanda udedele kudivayisi glucometers 2013. Ngakho-ke, isikhathi ukuhlaziywa lezi cwaningo 5 no-10 imizuzwana. imitha Memory has a umthamo 450 izilinganiso izinhlobo ezahlukene. Angakwazi ukuthola ezomhlaba. Ezinye Imiphumela kungenziwa ayifakiwe izibalo jikelele, omaka control.
Idivayisi kungenzeka exhunywe kwi-computer. Ikhebula yokuxhuma kungenziwa exhunywe kwi-isixhumi ngoba emapheshana test. Nokho, akukho ikhebula noma izinhlelo ze-computer uxhumo imitha akufakiwe.
Uma ukhetha i-imitha, kubalulekile ukwakha ulwazi mayelana uhlobo lomsebenzi wakhe. Indima ebalulekile udlalwa ngumuntu amadivayisi inkampani esikhiqiza. Ngemva kokuhlaziya kobufakazi eminingi yabantu abanesifo sikashukela, kungenzeka ukunquma Ukulingana okufanele icala glucometers yakho ethize. Isilinganiselwa glucometers ngokunemba muva nje Izibuyekezo abanesifo sikashukela okwaholela amadivayisi abakhiqizi ezifana:
Lezi imikhiqizo ihamba uhlu glucometers e-Ukraine.
Glucometers "Isethelayithi" ezivezwa inkampani waseRussia "Elta", onguchwepheshe imishini kubantu abanesifo sikashukela. inkampani Kudivayisi uqeda konke kudingekile ukwenza ukuhlaziywa. Isethi iza 10 alahlwayo test emapheshana, idivayisi esetshenziswa lubhoboze umunwe, emugqeni wokulawula, imanyuwali yomsebenzisi, nasikhwama somphako, nazingubo, amadokhumenti iwaranti.
Glucometer "Accu-Chek" ihlukile analyzer photometric. Le modeli libhekene yokuthi umthamo wegazi edingekayo ukuze ukuhlaziywa, kulawulwa imitha. Ngaphezu kwalokho, imitha "Accu-Chek" obonisa memory amakhulu izilinganiso 500, okuvumela ukuba ningangenisi izinguquko ezingeni ushukela sivela ku ukuhlupheka yabantu abanesifo sikashukela.
umugqa amamodeli futhi One Touch Horizon Ultra Smart bathandile inani elikhulu iziguli ukukala njalo kashukela. Idivayisi ngokushesha nemiphumela olunembile kakhulu. Engingakusho nje imizuzwana 5, imitha ukunquma ezingeni glucose. I ethile eyinhloko glucometers One Touch, bagubha umkhosi abasebenzisi izibuyekezo zabo - izindleko zabo eziphakeme.
Glucometer Biomine kunezinzuzo eziningi. Lokhu kuhlaziya high speed: ulwazi babonisa esikrinini ngemva kokunyamalala 8 ngemva kwemizuzwana igazi lisetshenziswa isivivinyo strip. Idivayisi ngokuzenzakalela ukubala izilinganiso ezimaphakathi ngesonto eledlule kanti ngenyanga. Imodeli has kunodonga lapho imiphumela, ngakho-ke Kunconywa ukuba abantu abadala kubonakale ezinkulu.
Isizukulwane esisha kwegazi glucose amamitha kukhona Ascensia, Accutrend, Optium, Medi Sense. Bahola simo glucometers 2014. Ilungiselela idivayisi yokufuna, kufanele uhlole ngokucophelela izimpendulo zabantu ususebenzisa ke, kunezinzuzo zako kanye nebubi (ukukala kwanga-glucometers). Yiqiniso, uma uthenga kudingeka kube ujwayelene nomsebenzi we-instrument, okwenza ukuhlaziywa test.
Ukwelashwa nokuvikelwa nosawoti kusaladi: ukubuyekezwa. Izindlela kokuphatha brine
Christian Vieri: kungaba isikhathi ukuyeka?
Impahla Spanish: Inkinga uyaqhubeka?!